Dhinacyada Yaman oo isku eedeeyay in xabad joojinta Yaman la jebiyay
Mucaaradka ayaa lagu eedeeyay in dhanka Sucuudiga ay madaafiic ku rideen
Labada dhinac ee ku dagaallamaya Yaman ayaa isku eedeeyay inay duqeyn ka geysteen magaalada Tacis.
Eedeynta cusub ayaa imaaneysa iyadoo lagu jiro heshiis xabad joojin 48-saacadood ah oo Yaman ka dhaqan galay.
Kumanaan shacab ah ayaa koofurta magaalada Tacis ku go'doonsan.
Afhayeen u hadlay hay'ada UNICEF ayaa sheegay in "dagaalka dhulkana aad ayuu u xoog badan yahay, Waa halis is rasaaseynta, madaafiicda, mararka qaar duqeyn aan kala sooc lahayn, miinada dhulk la geliyo, meel kastaa qarax ayaa ka dhacay".
Afhayeenkaasi ayaa intaa ku daray in "Hadaba xaaladda Tacis aad ayey u xuntahay xaqiiqdii, inkastoo hadda ay xabad joojin ka jirto magaalada. Shacabka aad ayey u cabsi qabaan waxaana lagu hayaa duqeyn culus oo labada dhinacba uga imaaneysa".
Xabad joojinta hadda jirta waxaa ku dhawaaqay is beheysiga uu Sucuudiga hogaaminayo ee taageeraya dowladda Yaman.
Qof u hadlay is beheysiga wuxuu Xuutiyiinta taageerada ka helaya Iraan ku eedeeyay inay gantaallo ku rideen xuduudda Sucuudiga iyo Yaman ay wadaagaan.
Balse, Xuutiyiinta dhankooda waxay sheegayaan inay u hogaansameen heshiiska, laakiin ay is difaaci doonaan haddii weerar lagu qaado.
Qof shacab ah oo deggan Tacis ayaa sheegay in uusan aamin saneyn xabad joojinta.
"Kuma niyad sami xabad joojintan gebi ahaanba. Waxaan soo aragnay xabad joojinno badan oo fashilmay. Xabad joojintan ma sii jiri doonto. Waan hubaa in aysan ka go'neyn labada dhinac. Marka ay xabad joojin jirto, dhinac kastaa wuxuu diyaariyaan ciidamadiisa si ay dagaalka ugu noqdaan". Ayuu yiri qof deggan Tacis.